Abdalle Dheere Oo Wasiir Oomaar Ku Karbaashay Cunaqabeynta Garacad? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Abdalle Dheere Oo Wasiir Oomaar Ku Karbaashay Cunaqabeynta Garacad?
Dowladda wakhtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya oo Hore u siyaasadaysay Maamulka Hawada Soomaaliya xiligii Doorashada Jubaland, ayaa haddana siyaasadaysay Maamulka Hawada xili Dalku Doorasho isu diyaarinayo, waxayna cunaqabateyn diyaaradeed ku sameysay Puntland, gaar ahaan Garacad.
Amarka lagu cunaqabateeyay horumarka Garacad iyo Garoonka Diyaarada ee magaaladaasi waxaa fududeeyay Cabdisiciid oo ah Lataliyaha Amniga ee Madaxweynaha Wakhtigiisu dhammaaday Farmaajo.
Cabdisiciid wuxuu garan waayay metelaada deegaankiisa ka saaran, wuxuuna u loogay cadow Puntland oo gaar ahaan gobolkiisa u diidan horumarka iyo maalgashi heer Caalami ah.
Soomaalidu waxay dhahdaa, maalinba nin baa lagu Baxsadaaye, arrinta Garacad waxaa ka dhiidhiyey Cabdullaahi Dheere oo ah sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Puntland, wuxuu si Kulul ula xisaabtamay Wasiir Oomaarka duulista Hawada oo ka hadlayey Fagaaraha #Clubhouse.
Oomaar jawaab waa u waayay su’aalaha xaqiiqda ku qotoma, sida maxaa u canaqabateyseen Garacad? oo Wasiirkuu ku marmarsooday in garoonku uusan amni ahayn xiliga diyaarada duushay! Laakiin Waxaa Oomaar war laga waayay markii Cabdullaahi u sheegay in uu Madaxtooyada Puntland ka tirsanyahay diyaarad u duushay garacad aysan jirin oo Iyadoo Garoonka Garoowe fadhida la cunaqabateeyay!! Wasiirku wax jawaab ah waa u waayay su’aashaasi.
Cabdullaahi Dheere oo dhammaan Bulshada Puntland iyo gaar ahaan Mudug weliba Garacad, siweyn ay u bogaadiyeen doodiisa xaqiiqiga ah wuxuu toosh weyn caawa ku ifiyey in DFS siyaasadii dhulka ee ay ku fashilmeen ay ka raadinayaan inay hawada ku xaliyaan, oo iyana ay ku fashilmeen.
Dadka reer Puntland hadda waa yaqaanaan qofka sida dhabta ah u metelaya, reer Mudug weliba kala barte farqiga u dhexeeya Cabdisiciid oo nalkii ka daminaya Garacad iyo Cabdullaahi dheere oo dood iyo dagaal ugu jira .
Taariikhda ayaa meel ku qoreysa qof walba wuxuu dadkiisa iyo deegaankiisa u qabtay.
Previous articlefarmaajo oo gaaray Teendhada Afisiyooni & Madaxda kale oo ku wajahan,,,,
Next articleShirkii Afasooni oo.muda la sugaayey oo furmay
Madaxweynaha Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa in uu Villa Somalia ku qaabilo xubno ka socda wakiillada beesha caalamka ee Soomaaliya, waxaana la filayaa inuu...
Waa kuma Ebrahim Raisi, madaxweynaha cusub ee Iiraan oo Reer Galbeedka...
Waa tuma madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris?